Top 6 kale oo QuickTime for Windows iyo Mac
1.1 ma ciyaari doono AVI on Yosemite
1.2 FLV u Quicktime on Mac
1.4 Quicktime Video inay iMoive
1.5 Quicktime Videos in YouTube
1.6 Quicktime Movie in DVD
1.7 QuickTime Video ku Apple TV
1.9 Talooyinka Quicktime Player Mac
1.10 Quicktime aan shaqayn
2.1 diinta .MOV in .MOV
2.2 Quicktime in MP3
2.3 Beddelaan Quicktime Video
3.1 Dalag Quicktime Video
3.3 Quicktime Motion gaabis ah
4.1 Quicktime Screen Rikoodh
6 lagu bedelan karo
6.1 Quicktime lagu bedelan karo
7.2 Quicktime Pro Talooyin
7.3 Quicktime isjiidka
7.4 Quicktime Update Taariikhda
7.7 Quicktime gartaan qalabka
7.8 VLC AMA Quicktime
7.9 Quicktime qaabab
7.10 Quicktime 64-Inyar Version
7.11 Quicktime MPEG-2 Radidiyaha
QuickTime waa mid ka mid ah barnaamijyada ay xaqiijin doonto in dadka isticmaala ay kala soo bixi lahaa iyo rakibi qalabka sida in ay daryeeli doonto in qaab QuickTime ah (MOV) waxaa lagu ciyaaray. User waa in sidoo kale loo xaqiijiyo in QuickTime pack codec kale ee la geliyo si loo eego in natiijooyinka waa unsurpassed iyo arrinta guud ee la xiriirta QuickTime qaab loo maqli karo in ka badan dhufto ee kale ee loo xalin lahaa fudayd iyo qanacsanaanta. Ayaa fursad kale oo halkan ku xusan waa in la soo bixi URL ayaa ah in lagu soo sheegnay la mid kasta oo iyaga ka mid ah si version ugu dambeeyay la soo bixi iyo natiijada waa wax waafaqsan shuruudaha user.
Qaybta 1. QuickTime Alternative
Qaybta 2. kale oo Top 6 QuickTime
Qaybta 3. Download QuickTime Lite
Waa mid ka mid ah baakad codec in la soo saaro by Microsoft Inc. si loo xaqiijiyo in barnaamijka la geliyo si qaab QuickTime waxaa sidoo kale si fudud oo ku qanacsan. User waa in sidoo kale loo xaqiijiyo in ay uqaabeeyaan in lagu macnayn lahaa in qayb ka mid ah tutorial yihiin ma ahan oo keliya loo arkaa laakiin waa fahan ahaan ka mid ah waqtiyada oo dhan sida ay daryeeli doonto in user helo natiijada ugu weyn iyo barnaamijka dhab ah la geliyo. Microsoft waxay caan ku tahay jarida horumarka casriga ah ku laayeen oo halkan barnaamijkan lagu rakibi karo, dhab ahaantii waa mid aad u lagula talinayaa labada daaqadaha iyo Mac madal.
Wax soo saarka ayaa la soo saaray iyadoo KL horumarinta kuwaas oo caan ku tahay horumarinta barnaamijka loo yaqaan pack K-Lite codec sida ay tahay mid ka mid ah unsurpassed iyo barnaamijyada ugu horumarsan oo is ogow in user helo natiijada muhiim iyo uqaabeeyaan guud ahaan ma aha oo kaliya la kulmay laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu sareeya marka ay timaado qaab QuickTime iyo ciyaartoyda la xiriira.
Muuqaaladan muhiimka ah ee barnaamijka ka mid ah hawlaha in la hubiyo in Libraries Apple waxaa lagu soo saaro iyo haddii kalaba si ay u sameeyaan qaarkood in maktabadaha QuickTime iyo faylasha la xiriira waxaa lagu ciyaaray fudayd iyo qanacsanaanta. Farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya qaababka ugu muhiimsan ee barnaamijka rasmiga ah ee ku sifayn la mid ah iyo qaybinta QuickTime waa xaqiiqda ah in khayraadka nidaamka wada baabbe'een hab waxaa loo arkaa inay ugu fiicnaa ee user. Software ugu weyn ee ay Apple sibuuxda iyo barnaamijka kale in ka yar yahay wada hadal inuu xaqiijiyo in muuqaalada xadidan waxaa jira si ay u taageeraan user.
Ka dib waxaa si joogto ah oo dhan, dhacdooyinka dhacay ee la xiriirta horumarinta iyo furitaanka guud iyo in la sii daayo barnaamijka:
Barnaamijka waxaa la bilaabay sannaddii 2006 ie 10-kii March.
Bishii June 2007 QuickTime lite la bilaabay u download ee dadweynaha guud.
Bishii September ee 2007 si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ay natiijada ugu fiican ee aad u hesho kale QuickTime la bilaabay la sifaatka aad u sareeya
Bishii December 2007 QuickTime kale version 2.2.0 ayaa la bilaabay in arrintan la xiriira
On July 15, 2010 waa in la ogaadaa in barnaamijyada sida alterative QuickTime oo kale dhabta ah ayaa laga saaray qaybinta ugu weyn.
On December 18 2010 QuickTime Lite 4.1.0 ayaa la bilaabay oo ku salaysan Apple QuickTime 7.6.9
Ka dib waa baakad sare codec kale marka ay timaado isticmaalka kale QuickTime. Waxaa sidoo kale in la ogaadaa in ay tahay kale oo u codec ie QuickTime kale oo aan ciyaaryahan laftiisa:
Waa mid ka mid ah codec ah ku xirato in user a rakibi karaa sida kale ah in kale QuickTime. Iyadoo audio iyo video muuqaalada gundhig u yahay mid ka mid ah baakad codec Timid nooca ugu dambeeya ee 11.4.0 ah
Mashruuca Perian 2.
version ugu dambaysay ee barnaamijka waa 1.2.3 waana mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka ee barnaamijka fanka, taas oo ay taageertaa tirada qaabab si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka ee QuickTime ah arrintan la xiriira. URL kor ku xusan waa in la isticmaalaa si loo soo bixi barnaamijka.
Codec 3. CCCP
Waa mid ka mid ah barnaamijka in cadeynayaa in user helo natiijada la xiriirta kale QuickTime iyo arrimaha guud in uu la kulmay. Version ugu dambaysay ee barnaamijka waa beta in la sii daayay on July 13, 2014.
4. filtarrada YAR
sii daayo The deggan barnaamijka sida nooca ugu dambeeya la bilaabay sannaddii 2000 iyo tirada la xiriira waxa ay si 2.7.2 kaas oo kale si ay u Alternative QuickTime ah. User wuxuu hubin karaa in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa si aad u hesho natiijooyinka.
barnaamijka la bilaabay la nooca ugu dambeeya ee 4.2.2 oo la sameeyey iyada oo technology si uu u sameeyo qaar in user helo kale oo loo baahan yahay. Barnaamijka ayaa waxaa lagu qiimeeyay sare by users ah oo ay tahay mid ka mid ah siyaabaha ay u hubiyaan in user helo barnaamij oo waafaqsan shuruudaha.
Filter 6. AC3
sii daayo The deggan barnaamijka la bilaabay sannaddii 2013 version barnaamijka uu soo tiriyey waa 2.6.0b iyo barnaamijka loo qoray in C afka ++ oo waxaa lagu qiimeeyay sida A +.
Sidoo kale waa mid ka mid ah qoraalkii ugu dambeeyey ee Alternative QuickTime ah in lagala soo bixi karaan iyadoo la isticmaalayo URL ayaa ah in lagu soo sheegnay sida hoos. URL ee lagu xusay ee hoosyimaada halkan waa laga qaaday goobaha ugu sareysa in barnaamijyada software oo ciidankii. Saddexda links waa sida soo socota:
Guud ahaan download fahan ahaan mid ah oo kale QuickTime ah been in xaqiiqda ah in publisher ee kale oo gaar ah ayaa la xaqiijiyey ururada caanka ah ee erayga tusaale ahaan Linux iyo Microsoft. Ayaa fursad kale oo kor ku xusan waa fududahay in la rakibo sida ay sameeyaan habka guud ee ciyaaro video fudud iyo enchanting. User Sidaas awgeed waa in sidoo kale is ogow of macluumaadka ka hor inta kale la soo bixi ka dib kale in waxaa sidoo kale akhri si mustaqbalka fog jirto arrinta ma at dhan iyo shaqeynayaan la xiriira waxaa si fiican u riyaaqay.
Wareeji oo badalo QuickTime video oo aan laga badinin tayada
Meeh version 64-yara ee QuickTime for Windows?
Sida loo badalo QuickTime (MOV) in MP3 tayo asalka
Sida loo sii qulquli clips movie QuickTime la AirPlay
Top 5 QuickTime gartaan qalabka aad qabto si loo soo dajiyo
Xalin QuickTime ma ciyaari doono AVI on Yosemite
3 talooyin ah ee isjiidka QuickTime daawashada iyo degsado
> Resource > Converter MOV > Top 6 QuickTime kale oo u Windows iyo Mac